Foosha Villa Somalia iyo Hadal heynta xilka Ra'iisul Wasaaraha (Warbixin) - Jowhar Somali news Leader
Home News Foosha Villa Somalia iyo Hadal heynta xilka Ra’iisul Wasaaraha (Warbixin)
Foosha Villa Somalia iyo Hadal heynta xilka Ra’iisul Wasaaraha (Warbixin)
Saacadihii u dambeeyay ayuu Madaxweyne Farmaajo ku jiraa inuu ku soo magacaabo Ra’iisul Wasaarihii labaad tan iyo markii uu xukunka qabtay, iyadoo magacaabidan ay ku soo aadeyso xilli xasaasi ah oo Siyaasadda Soomaaliya ay mareyso Badweynta.
Madaxweyne Farmaajo waxaa heysta culeysyo siyaasadeed oo ay ugu weyn tahay magacaabida xilka Ra’iisul Wasaaraha oo haatan ay ku qaadatay 28 maalmood, laga yaabo inay wax ku darsamaan, balse waxaa hubanti ah in labada maalmood ee soo socota inuu magacaabo marka loo eego waqtiga yar ee uu heysto iyo kala guurka siyaasadeed ee uu dalku galay iyo caqabadaha ku xeeran oo ay ka mid tahay doorashada.
Ninka la soo magacaabi doono kuma raaxeysan doono, mana nasan doono, waayo waxaa laga doonayaa inuu maro waddo qarda jeex ah, oo ay daadsan yihiin shabaqyo siyaasadeed, sidaas darteed ninka imaan doono waxay ku xiran tahay inuu la socdo hadba siyaasadda uu la yimaado.
Inkastoo dadka Soomaaliyeed ay magacyo fara badan hadal hayaan ninka ugu miisaanka weyn oo dadka hadal hayaan waxaa ka mid ah Cali Maxamed Geeddi oo horay u soo noqday Ra’iisul Wasaare, lana aaminsan yahay inuu miisaan siyaasadeed ku leeyahay Banaadir iyo qaar ka mid ah Maamulada dalka.
Sidoo kale waxaa jira shaqsiyaad kale oo iyana la hadal haayo, oo dadka ay siyaabo kala duwan ugu soo qorayaan baraha bulshada.
Lama oga qofka ay foolaneyso Villa Somalia, marka laga soo tago hadal heynta dadweynaha iyo magacyada baraha bulshada qabsaday.
Ninka Xafiiska ka bedeli doono Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre shaqo sahlan ma soo doonan, meel Shabaab ayaa ku sugaya, Amniga Muqdisho, Maamul Goboleedyada iyo Xisbiyada Siyaasadeed ee Mucaaradka, waxaana la eegayaa intaas siyaasadda uu ku wajaho.
Dadka Siyaasadda ka faalooda waxay sheegayaan ninka la magacaabi doono in uusan noqon nin siyaasadda ku cusub, waayo qof yaqaana qarda-jeexyadan haddii la magacaabo wuu garanayaan sida loo maro, laakiin naaquudaha Doonta kaxeyn doono haddii uu noqdo qof cusub waa adag tahay inuu wajaho hirarka Badweynta sida uu uga gudbo.